इलामको माइमझुवाबाट ७ थान बन्दुक बरामद : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश १ इलामको माइमझुवाबाट ७ थान बन्दुक बरामद
इलामको माइमझुवाबाट ७ थान बन्दुक बरामद
इलाम । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. २ माइमझुवाबाट सात थान भरुवा बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
प्रहरीले सूचनाको आधारमा जंगलको ओढारको एक स्थानबाट ४ थान र अर्को स्थानबाट तीन थान गरी सात थान बन्दुक बरामद गरेको प्रहरीको भनाई छ । तर स्थानीय स्रोतका अनुसार शिकार गर्नेबाट प्रहरी बरामत गरेको हो । स्रोतले भन्यो सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ जमूनाबाट बँदेलको शिकार गर्दै एउटा समूह माइमझुवा पुग्यो तर उनीहरुसँग भने बन्दुक थिएन ।
जमूनाबाट शिकारी आएको थाहा पाएपछि माईमझुवाका स्थानीय शिकारीहरु पनि बन्दुकसहित आएको र सामान्य विवाद जस्तो भएपछि बन्दुक बिनाका शिकारीहरु फर्केका थिए । सोही बेलाका प्रहरीले बरामद गरेको बन्दुक हुन सक्ने अनुमान छ । तर, प्रहरीले भने शिकारी पक्राउ नपरेको र बन्दुक ओढारबाट बरामद गरेको जनाएको छ । ओढारबाट बरामद गरिएको र सो बन्दुकहरु कसको हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले बताए ।
लकडाउन कडाइ गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
राजधानी समाचारदाता - May 13, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा...
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी - February 26, 2020 0
जकार्ता । इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभा प्रान्तको कारावाङ जिल्लामा आएको बाढी, पहिरोबाट १० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
Breaking News तुलसी भण्डारी - May 14, 2020 0
Breaking News मधुजंग पाण्डे - December 24, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले स्थापना गरेको...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - January 12, 2021 0
प्रदेश ४ अन्जनराज न्यौपाने - November 18, 2020 0